Kubika Zvokudya Pagungano—Basa Rinoratidza Rudo | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Mauritian Creole Maya Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
KUUNGANA kunoita vanhu vaMwari pamagungano vachidzidziswa naJehovha kunofadza chaizvo. Mufaro wacho unobva wawedzera pavanodya pamwe chete.
Muna September 1919, Vadzidzi veBhaibheri vakaita gungano remazuva 8 kuCedar Point, Ohio, U.S.A. Pakarongwa kuti vanhu vaiuya kuzopinda gungano vagare mumahotera vachidyira imomo, asi kwakazouya vanhu vakawandisa kupfuura vaitarisirwa. Pane imwe hotera, mahweta echirume neechikadzi akatomboramwa basa paakaona vanhu vakawandisa vaida kupiwa zvokudya. Apererwa nezano, maneja wavo akakumbira kana zvaiita kuti vechiduku vakanga vauya kugungano vabatsire, uye vakawanda vakabvuma. Mumwe wacho aiva Sadie Green. Hanzvadzi iyi yakati, “Ndakanga ndisati ndamboshanda sahweta, asi takanakidzwa chaizvo.”
Mumakore akatevera, kubikwa kwaiitwa zvekudya pamagungano kwakaita kuti vakawanda vawane mukana wekubatsira hama nehanzvadzi dzavo. Vechiduku vakawanda vakabatsirwawo kuti vave nezvinangwa zvokunamata pavaishanda nevamwe vaKristu. Gladys Bolton aishandawo kudhipatimendi rokubika pagungano rakaitwa muna 1937. Akati, “Ndakasangana nevanhu vaibva kune dzimwe nzvimbo uye vakataura kuti vaikunda sei matambudziko avaisangana nawo. Ipapo ndipo pandakatanga kuva nechido chokupayona.”
Beulah Covey uyo akapinda rimwe gungano akati: “Kushanda nesimba kwaiita vanhu pabasa iri kwaiita kuti rifambe zvakanaka.” Asi basa racho rakanga risiri nyore. Pane rimwe gungano rakaitwa paDodger Stadium kuLos Angeles, California muna 1969, Angelo Manera akaudzwa atova pagungano kuti ndiye ainge anzi atungamirire pakubika zvokudya. Akati, “Musi uyu hana yangu yakarova zvaisina kumboita!” Rimwe basa raifanira kuitwa paigadzirirwa gungano iri raiva rokuchera mugero wainge wakareba mamita 400 waizoiswa paipi yaitakura gasi raizoshandiswa kukicheni.
KuSierra Leone muna 1982, hama dzaizvipira kushanda dzakatanga dzabvisa masora nemarara, dzichibva dzavaka pokubikira dzichishandisa zvinhu zvaiwanikwa munharaunda yacho. KuFrankfurt, Germany, muna 1951, hama dzakahaya chitima chaishandisa sitimu uye sitimu iyoyo ndiyo yaishandiswa kudziyisa mapoto 40 okubikira. Vanhu 30 000 vakapakurirwa zvokudya muawa imwe chete. Kuti basa racho risanyanya kuomera vanhu 576 vaishanda kudhipatimendi rokusuka, vanhu vakapinda gungano racho vakauya nemapanga nemafoku avo. KuYangon, Myanmar, vaibika havana kuisa masipaisi akanyanya kuwanda muzvokudya zvaizopiwa hama nehanzvadzi dzainge dzabva kune dzimwe nyika.
Annie Poggensee akakurudzirwa chaizvo paakanga akamira pamutsetse wezvokudya pane rimwe gungano rakaitwa kuUnited States muna 1950 kunyange zvazvo zuva raipisa. Anoti: “Ndakabatikana nezvaitaurwa nedzimwe hanzvadzi mbiri dzainge dzabva kuEurope nechikepe.” Vaiudzana kuti vakanga vabatsirwa sei naJehovha kuti vapinde gungano racho. “Hapana mumwe munhu wandakaona achifara sezvaiita hanzvadzi mbiri idzodzo,” akadaro Annie. “Kwaipisa chaizvo uye vakatora nguva yakareba vakamira pamutsetse, asi havana kana kumbozvinzwa.”
Pamagungano makuru akawanda, paiva nemazitende akakura uye mumatende iwayo maiva nematafura akanga akakwirira zvokuti vanhu vaitodya vakamira. Izvozvo zvaiita kuti vakurumidze kupedza kudya zvopawo vamwe mukana. Iyi ndiyo nzira chete yavaigona kushandisa kuti vape vanhu vakawanda kudaro zvokudya panguva iyoyo yokuzorora. Mumwe murume akanga asiri Chapupu akati: “Vanhu vechechi iyi vakaoma. Vanodya vakamira.”
Vakuru vakuru vemasoja nevamwe vanhu vemuhurumende vakashamiswa chaizvo nokurongeka kwainge kwakaita zvinhu. Pashure pokunge vaongorora zvaiitika kudhipatimendi redu rokubika paYankee Stadium kuNew York City, vakuru vakuru veUnited States Army vakakurudzira Major Faulkner weBritish War Department kuti azoongororawo zvaiitika. Saka iye nemudzimai wake vakauya kugungano ra1955 raiva nemusoro waiti “Umambo Hunokunda” rakaitirwa kuTwickenham, England. Akataura kuti rudo ndirwo rwaiita kuti basa rifambe paibikwa zvokudya.
Kwemakumi emakore, hama nehanzvadzi dzaizvipira kupa vanhu vainge vauya kumagungano zvokudya zvakanaka uye zvisingadhuri. Asi basa guru iri raiwanzoita kuti vanhu vakawanda vaizvipira vashande kwemaawa akawanda uye dzimwe nguva vaitadza kunzwa zvimwe zvikamu zvepurogiramu kana kuti purogiramu yose zvayo. Makore okuma1970 ava kupera, zvinhu zvakachinjwa munzvimbo zhinji. Basa rokubika zvokudya pamagungano rakanga risisina zvakawanda-wanda zvaiitwa. Uye kutanga muna 1995, vanhu vaiuya kumagungano vakanzi vauye nezvekudya zvavo. Izvi zvakaita kuti vaya vaimbobika uye kupa vanhu zvokudya vakwanise kuteerera purogiramu uye kushamwaridzana nevamwe vaKristu. *
Jehovha anokoshesa chaizvo vaya vaishanda nesimba vachishumira vamwe vaKristu! Vamwe vangasuwa mazuva iwayo ainakidza aibikwa zvokudya pamagungano. Asi chokwadi ndechokuti: Rudo ndirwo rwatichiri kunyanya kuzivikanwa narwo pamagungano edu.—Joh. 13:34, 35.
^ ndima 12 Kunyange zvakadaro, pachine mikana yakawanda yokuti vanhu vabatsire kumadhipatimendi akasiyana-siyana pamagungano.